Ireo mpilalao 'Hellraiser' dia nanatevin-daharana ny 'Maty tamin'ny antoandro' - iHorror
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Mpandray anjara 'Hellraiser' no niditra tamin'ny 'Maty tamin'ny andro'
Mpandray anjara 'Hellraiser' no niditra tamin'ny 'Maty tamin'ny andro'
Tonga ny Hellpriest sy ny mpiresaka
by Trey Hilburn III Septambra 12, 2021 1,610 hevitra
Maty ny Ora dia nanao asa manaitra ny filaharana ny kintana feno roaster ny sary mampihoron-koditra. Tena voaozona izy raha mandinika. Mila mahazo ny ekipany ara-dalàna amin'ny ankapobeny isika Zoma ny faha-13th debacle. Efa manana Ghostface, Michael Myers, Freddy Krueger, Leatherface ary ny hafa izy ireo ary ankehitriny dia nanampy Hellraiser tarehin-tsoratra.
The Hellraiser ny endri-tsoratra dia ahitana ny The Hell Priest sy The Chatterer izay nantsoiko hatrizay hoe Chatter Box fa, ao no anananao.
Ny tarehin-tsoratra tsirairay dia nahazo ny tranofiara avy. Ny iray miaraka amin'ny The Hell Priest dia manala tompona boaty vaovao. Avy eo fandinihana toetra ny The Chatterer.
Ny lalao dia sisa velona amin'ny kianja isometrika izay ianao sy ny mpilalao telo hafa dia manandrana mandositra ny tototry ny mpamono olona izay mihaza anao. Maty ny Ora efa nivoaka nandritra ny fotoana kelikely, ary manohy mampiditra tarehin-tsoratra marobe hatrany hatrany ao amin'ny lisitra misy azy.
Izaho manokana dia manana fihetseham-po mifangaro amin'ny lalao. Nahatsapa foana aho fa ny fanaraha-maso ny lalao dia nahatsapa ho henjana sy karazana tsy famaliana. Tsy tiako io noho ny fanaraha-maso sy ny fomba fiasa eo amin'ny sary. Saingy, niverina foana aho na teo aza izany. Tsy azoko atao ny mandany ny fahafaha-milalao toy ireto sary mampihoron-koditra ireto.
Mba hahatonga ny zavatra hahaliana kokoa, ny tarehin-tsoratra tsirairay avy dia tonga miaraka amin'ny ambaratongany avy. Ohatra, Michael Myers dia tonga amin'ny haavon'ny Haddonfield.
The Hellraiser DLC for Dead by Daylight dia misy amin'ny 20 septambra amin'ny PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, ary Steam.